China Carrot Powder rụpụta na Factory | Nongchuanggang
Nkọwa nkọwa nke karọt ntụ ntụ: Carrot ntụ ntụ bụ ụdị nri edozi, na isi ihe dị na ya, bụ karọt. Karọt ntụ ntụ nwere nnukwu vitamin C, yana ọgaranya na ihe ndị na-achọpụta, nwere ike idebe ọrụ akụrụ, ma chebe anya. Nri nke karọt karọt dị ezigbo mma, ị nwere ike iji ntụ ntụ karọt iji gbakwunye nri na-edozi ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịhazi metabolism, nke mere na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị n'ọnọdụ ka mma. Karọt ntụ ntụ dị mfe esi nri, ọ bụrụhaala na mmiri na-esi na mmiri na-agba ọsọ
Nchoputa sayensi nke oge a choputara na ahihia nkpuru ahihia nwere otutu vitamin na mineral, lignin, niacin, protein, fat, ma nweekwa calcium, site, iron na ihe ndi ozo, karọt nkpuru ahihia nri mgbe emechara, nwere ike imeju enweghi vitamin A nke mmadụ, si otú a na-achịkwa metabolism, meziwanye nsogbu nke mmadụ. Karọt mkpụrụ ntụ nwere carotene, nke na-adị mfe n'ahụ mmadụ. Carrots nwere ihe ruru ise n’ime amino acid asatọ ahụ mmadụ chọrọ, ya na lysine bụ nke kachasịnụ. Dabere na nyocha na mmụba sayensị, ahụ chọrọ ihe dị ka 95% nke vitamin A site na nri osisi nke njikọta carotene, ọkachasị n'oge uto nke ndị nọ n'afọ iri na ụma, kwesịrị ịbụ ngwaahịa ọgwụ ọgwụgwọ kacha mma.
uzuzu, dika onodu ozo nke ogwugwu, agwakọta, nyocha, nkwakọ ngwaahịa ma ghọọ nri nri agwusiri. Ọ nwere mmetụta nke imeju na ọhụụ bara uru, diaphragm bara uru na eriri afọ sara mbara, na-akwalite metabolism na ime ka ọgụ dịkwuo mma. Ọ ga-eji na-eme ka porridge sizinin, mmiri ihe ọ ,ụ juiceụ, nkpuchi nkpuchi, achicha na achịcha, ọnwa achicha ndochi, ụmụaka oriri na-edozi emeju, na-arịa ọrịa mmiri mmiri nri, ka ice ude, jelii pudding, wdg
.Dị Mkpụrụ osisi
Formdị Ntụ ntụ
Dị iche iche karọt ntụ ntụ
Dị Mwepu Mwepu Mwepu
Nkwakọ ngwaahịa eriri drọm
Ọkwa Ọkwa nke mbụ
Tụkwasịnụ Ikike 10000 Kilogram / kilogram kwa ọnwa
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa Ngwunye a na-emebu bụ 25kg net katọn drum ma ọ bụ igbe nwere akpa polyethylene n'akụkụ.
Nke gara aga: Meshed Karọt
Osote: Karọt akpịrị ịkpọ nkụ